Halatromby tany Mampikony :: Lasan'ny dahalo natao takalon'aina ny talen-tsekoly iray • AoRaha
Halatromby tany Mampikony Lasan’ny dahalo natao takalon’aina ny talen-tsekoly iray
Ankoatra ny fandrobana ny omby fito amby valopolo teo an-tanàna dia nitondra olona natao takalon’aina ny dahalo nanafika, tany Ampondralava Mampikony II, afak’omaly vao mangiran-dratsy. Lasan’izy ireo nataony babo ny lehilahy iray, dimy amby dimampolo taona, talen’ny sekoly ambaratonga voalohany (Epp) ao an-toerana. Votsotra izy, taorian’ny fifandonana teo amin’ny dahalo sy ny zandary, ny harivariva.
Nanao andiany marobe ny dahalo manodidina ny efapolo lahy niditra tao amin’ity tanàna iray tany Mampikony II ity. Nisy olona efa nifoha sy nivezivezy teny an-tokotany, tamin’ny efatra ora maraina, nahatongavan’ny malaso. Tifitra variraraka no nataon’ireo olon-dratsy. Voatifitra ny lehilahy lehibe iray, 62 taona. Niparitaka namonjy fiafenana ny mponina. Etsy an-daniny nanararaotra nitondra ny omby ny dahalo. Tamin’izany ihany koa no nitondran’izy ireo an’ilay talen-tsekoly noentina nampitahorana sy nanakanana ny fokonolona tsy hiroso tamin’ny fanarahan-dia. Nizotra nankany amin’ny distrikan’
i Tsaratanàna ny lalan’ny dahalo. Zandary maro niasa tany amin’ny toerana manodidina sy fokonolona tao Ampodralava no nanao ny fanenjehana. Votsotra, tamin’ny dimy ora hariva tany ho any, ilay natao takalon’aina. Tafaverina ihany koa ny omby valo amby roapolo.
Fanafihana mitam-basy :: Niaraka voasambotra ny mpiasa an-trano sy olona telo mpihavana
Adin-kira gasy lehibe :: Hifamolaka etsy Mahamasina Raveloson Jean Ba sy Sahondrafinina zanany